देशमा अझैं ३ लाख इन्जिनियर आवश्यक छ- पाैडेल |
प्रकाशित मिति :2018-08-15 08:04:39
प्रा. तोया नारायण पौडेल
चिफ, स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी
हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
इन्जिनियरिङ शिक्षा भनेको जुनसुकै देशको लागि अति आवश्यक शिक्षा हो । अझ हाम्रो जस्तो अल्पविकशित दैशको लागि त इन्जिनियरिङ शिक्षाको भूमिका अझ धेरै महत्वपूर्ण छ । जुनसुकै विकास गर्न इन्जिनियरको प्रमूख भूमिका रहन्छ । हाम्रो देशलाई बिकसित राष्ट्र बनाउने हो भने लगभग ३ लाख इन्जिनियरको आबश्यकता छ । आज सम्म नेपालमा ४५००० इन्जिनियर दर्ता भएका छन् । जसमध्ये धेरै इन्जिनियर निवृत्त भैसकेका छन् भने १२÷१५ हजार इन्जिनियर विदेशीएका छन् । तशर्थ देशमा इन्जिनियर जनशत्तिको अझै ठूलो अभाव छ । सबैलाई उचित ठाउँमा उपयोग गर्ने हो भने मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्छ ।
विद्यार्थीले विदेशमा पढ्नु र नेपालमा पढ्नुमा कतिको फरक छ ?
नेपालमा र विदेश पढाइ हुने इन्जिनियरिङ विषयका पाठ्यक्रम उस्तैउस्तै हो । जसलाई सबै देशका इन्जिनियरिङ काउन्सिलले सिफारिस गरेका हून्छन । हाम्रो देशमा अलिबढी सौद्धान्तिक पढाइ हुन्छ । साथै प्रयोगात्मक पनि गरिने हुनाले हाम्रो समाज र परिवेशमा चल्न सक्ने इन्जिनियर नै नेपालका लागि बढी उपयोगी हुने गरेको देखिन्छ । त्यस कारण नेपालमा नै उत्पादन भएका इन्जिनियरहरु धेरैको प्रथम रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।
इन्जिनियरिङको कुन विषयमा राम्रो स्कोप छ ?
मैले अगाडि नै भनि सके नेपाललाई यति धेरै इन्जिनियरको आवश्यत्ता छ कि सबै क्षेत्रका इन्जिनियरहरुलाई उत्तिकै अबसर छ । त्यसमा पनि नेपालको विकासको लागि सिभिल इन्जिनियरको प्रत्येक ठाउँमा आवश्यक हुने हुनाले यसको महत्व बढी देखिनु स्वाभाविक हो । हाम्रो देशबाट विदेश जाने चलन बढी भएकोले कम्प्युटर, आईटी, इलेट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, मेकानिकल लगाएत सबै बिषयका नेपाली इन्जिनियरले देश तथा विदेशमा उत्तिकै ठाउँ पाएका छन् ।
नेपालमा इञ्जिनियरको भविष्य कस्तो छ ?
जुनसुकै देशको विकास हुनका लागि धेरै दक्ष इन्जिनियरको आवश्यकता हुन्छ । नेपाल त अझै विकशित राष्ट्र हो । यो देशमा रहेका र अब उत्पादन हुने इन्जिनियर दक्ष भएनन् भने देश धेरै पछाडि पर्छ । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको नै इन्जिनियर हो । त्यसकारण राज्यले इन्जिनियर उत्पादन हुने संस्थाहरुलाई पूर्ण निगरानीमा राखी जति सक्दो इन्जिनियर उत्पादन गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई रोजगारीको बाटो देखाइदिनुपर्छ । देशमा संघीयता लागू भैसकेको छ । प्रत्येक संघीय राज्यले आफ्नो विकास गर्नका लागि सबै इन्जिनियर पूर्णरुपमा उपयोग गरी विकासमा लाग्नूको विकल्प छैन ।
ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका बारेमा केही बताइदिनुस न ?
यस हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज २००१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । सुरुमा म्यानेजमेन्ट विषयहरु मात्र पढाइ हुन्थ्यो । सन् २००८ देखि इन्जिनियरिङ तथा बीटेक इन बायोटेक्नोलोजी पढाइ हुन थाल्यो र अहिलेको समयमा धेरैजसो इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुँदै आएको छ । कलेजले क्लास सुरुभएको दिनदेखि विद्यार्थी र अभिभावकलाई counselling गरी उनीहरुलाई सचेत गराएको छ । पढ्न सक्ने विद्यार्थीलाई थप क्लास दिने, मिहनेत गर्न सिकाउने त्यसो गर्दा पनि उसमा परिवर्तन भएन भने उसलाई संकाय परिवर्तन गर्न समेत भन्छौ । हामीले समयमा जानकारी विद्यार्थी र अभिभावक दुबैलाई दिन्छौं तर उहाँहरुले आफ्नो लेभल अनुसार हाम्रो कुरालाई मान्नु भयो भने दक्ष इन्जिनियर बनाएर देशको विकासलाई एक इट्टा थप्ने काम गर्छौ ।
अन्त्यमा एकपटक विद्यार्थी र अभिभावक हामीलाई पुतलीसडकस्थित हाम्रो नयाँ कलेजको भवनमा आएर हामीसँग इन्जिनियरिङ तथा बायोटेक्नोलोजी सम्बन्धि जानकारी लिन आग्रह गर्दछु । जुन ठाउँ र जहाँ पढे पनि कुन विषयको कति महत्व छ त्यस सम्बन्धि हामी हजुरहरुलाई जानकारी गराउँदछौ र अहिले हाम्रोमा पढाइ हुने विषयहरु स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीमा BE Civil , B.E Computer, B.I.T , BE Electronics and Communication , B.Tech in Bio Technology हुन भने स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा MBA, EMBA, BBA , BHM , BLAS हुन ।